မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ — MYSTERY ZILLION
February 2009 edited February 2009 in မိတ်ဆက်
ကျွန်တော်နာမည်က အောင်ကျော်ဇော ပါ ခင်ဗျာ။ နာမည် အမှန်လည်း အောင်ကျော်ဇော ပါ။
ကျွန်တော်က ဒီ mz ထဲမှာ ၀င်ဖြစ်တာ၀မ်းသာပါတယ်။ အင်တာနက်ကို လည်းသိပ်မသုံးတတ်ပါဘူး။
၀ိုင်း၀န်းကူညီကြပါလို့အနူးအညွတ်တောင်ပန်ပါတယ်။ အားလုံးကို ခင်မင်ချင်ပါတယ်။
the antiviruses alert you men coz of the following
and dunbworry abt this and as soon as i informed and alerted to them, they've already remove it
but, they told me that they can't reupload it yet coz of connection
for the dreamcreators, dun be worry abt them and they are neither the hackers nor ****ty guys. i've been known them since several previous years and now they told me and requested me to help them to find out the brilliant designers and developers and i pointed this site to them and that's why they reach to this forum:1:
for the above infected code, i can't decode it yet coz i'm @ outside and my pc is left @ home and as soon as i decode it, i'll inform you men which site is rooted for this.:1:
အဟဟ wrote: »
sorry ရောသွားလို့ ဟိုဘက်က thread ကို reply ပြန်လိုက်တာနေရာမှားသွားလို့ပါ:D
ကိုအင်ဖိုကြီး မကြိုဆိုစဖူး ကြိုဆိုနေပါလားလို့ မှတ်တာ လက်စသတ်တော့ သူကနေရာမှားနေတာကိုး :d
You are welcomed to our family !!!!
Be safe and sound !!!!
မင်ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံပါစေလို့ အားလုံးကို နှုတ်ခွန်း ဆက်ရင်း တစ်ခါတည်း မေးပါရစေခင်ဗျာ။registry,database programing,networking ,electronic ...အခြေခံ မြန်မာလိုလေးများ ရှိကြမလားပဲ။ရှိရင် မျှပေးကြပါလို့ အသနားခံပါတယ် ခင်ဗျာ။အမှားပါရင်လည်း ခွင့်လွှတ်ကြပါ ခင်ဗျာ။:103::103::103:
mingalar par aung kyaw zaw
Let's Share Zillions of Knowledge.